Cyanogenmod 9 stable misy izao | Avy amin'ny Linux
Azo ampiasaina izao ny stable Cyanogenmod 9
Ilay malaza CyanogenMod 9 ROM afaka mandray an'io adjectif io ihany amin'ny farany, na dia tsy maintsy hazavaina aza fa miorina amin'ny CM9 Sandwich Ice Cream amin'ny AndroidNa dia efa miasa amin'ny CM10 miaraka amin'i Jelly Bean aza izy ireo dia te hanidy ny version 4.0 miaraka amina famoahana ny rindrambaiko miorina.
Ny fananganana CyanogenMod 9 dia halefa ao amin'ny mpizara aminay anio alina. Araka ny nomarihina teo aloha, ity no ho fiafaran'ny tsipika ho an'ny sampana ICS amin'ny kaodinay; ny fanarenana lesoka fitsikerana ihany no ho entina manomboka izao », hoy ny ekipa tao amin'ny bilaogy iray.
Ny kinova vaovao dia misy ny fanohanana ireo fitaovana marobe mifototra amin'ny Ice Cream Sandwich. Na dia hifantoka amin'ny CM10 aza ny fifantohana manomboka izao, ny ekipa dia hamela ireo mpankafy hamorona ROM ho an'ny fitaovana maro hafa.
“Ny famotsorana anio alina dia ho an'ny ankamaroan'ny fitaovanay mifanaraka amin'ny ICS, hahatratra ny laggards ary hamela ny varavarana misokatra ho an'ny ROM natokana ho an'ny fitaovana fanampiny avy amin'ireo mpikojakoja anatiny sy ivelany isika. Fa kosa, ny ekipa fototra dia hiompana manokana amin'i Jelly Bean sy hitazomana ny codebase CM 7, ”hoy hatrany ny lahatsoratra bilaogy.
Ho an'ireo manontany tena hoe maninona ny ekipa CyanogenMod no nanohy ny fampandrosoana CM 9, tsotra ny valiny: tsy tian'izy ireo ny hamela zavatra tsy feno. Ny fahafaham-ponao dia avy amin'ny fanatratrarana ny tanjonao, voalaza ao amin'ny bilaogy koa izany.
"Ity kinova ity dia natao ho fananganana sahaza ho an'ny besinimaro koa, indrindra ireo izay tsy hanana CM10 kinova 100% hiasa eo noho eo na manohitra izay antsoina hoe 'preview,' 'alpha', 'beta' na 'nightly'» Manazava ny ekipa .
Sintomy ny Cyanogenmod 9
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Azo ampiasaina izao ny stable Cyanogenmod 9
GUrren dia hoy izy:
Manana izany amin'ny X8 aho ary milamina tsara 🙂
Valio i GUrren
Ele dia hoy izy:
Vaovao tsara dia tsara fa mbola tsy namoaka ny Bootloader an'ny Sk17i ary araka ny fahafantarako fa ilaina sy ilaina izany.
Mamaly an'i Ele
Ayosinho El AbayaLde dia hoy izy:
Ahoana no fomba fametrahana an'ity ROM ity amin'ny galaxy ACE-ko?
Valiny tamin'i Ayosinho El AbayaLde
Navoaka ny LibreOffice 3.6
TextMate 2 dia rindrambaiko maimaimpoana izao!